BREAKING NEWS Archives - ShwengweGames
နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်းအဆိုးရွားဆုံး ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နိုင်သည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး ၂ လုံး တရုတ် ဝင်မည်
နှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်းအဆိုးရွားဆုံး ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နိုင်သည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး ၂ လုံး တရုတ် ဝင်မည် .
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး ၂ လုံး ကြောင့် တရုတ် ၊ ဟောင်ကောင် ၊ ထိုင်ဝမ် ၊ ဂျပန်ကျွန်းဆွယ်များ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ကြုံတွေ့နိုင်
သိပ်မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်း အပူပိုင်းမုန်တိုင်း Cempaka နဲ့ In-Fa လို့ခေါ်တဲ့မုန်တိုင်းကြီး ၂ ခုဟာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကနေ အနောက်အာရှနှင့်မြောက်ဘက်ဘက်ကို
ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဘို့တာဆူနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ CNN သတင်းမှာဖော်ပြသွားပါတယ် ။ရေကြီးရေလျှံမှုတွေလည်းကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ် ။
Cempaka အပူပိုင်းဇုန်မုန်တိုင်းအဖြစ်ကနေ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဖြစ် အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်း ၀၅:၀၀ ခန့်မှာ တောင်တရုတ်ပင်လယ် ၊ ဟောင်ကောင်ကမ်းခြေကနေ ကီလိုမီတာ ၁၈၅ အကွာကနေဗဟုပြုကာ ၁ နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ ၁၂၀ နှုန်းနဲ့ တိုက်ခတ်နိုင်ပါသည် ။
ဟောင်ကောင်ကိုတော့ တစ်နာရီလျင် ကီလိုမီတာ ၄၁ မှ ၆၂ ကီလိုမီတာအထိ ဖြတ်သန်းတိုက်ခိုက်နိုင်တာကြောင့် အရေးပေါ်သတိပေးချက်အဆင့် ၃ ထိကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
In-Fa မုန်တိုင်းကတော့ မြောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားသွားပြီး ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနှင့် ဂျပန်ကျွန်ဆွယ်တောင်ပိုင်းကို တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်အားပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ် ။
Cempaka မုန်တိုင်းနှင့်ထိပ်တိုက်မဆုံနိုင်ပါဘူး ၊လာမယ့် ၂၃ ရက်နေ့တွင် ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့တော်မှာ ကျင်းပမည့် အိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်အတွင်း မုန်တိုင်းနှင့်ရင်ဆိုင်နိုင်ရပါသည် ။
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံကိုတော့ လာမည့် ၂၃ ရက်နေ့တွင် မုန်တိုင်းဟာအားကောင်းကောင်းနဲ့ဝင်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်း ၅၀ အတွင်းသဘာဘေးဒဏ်အဆိုးရွားဆုံးကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နိုင်တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ် ။
Photo CNN / SiThuMaung
ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္းအဆိုး႐ြားဆုံး ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ႏိုင္သည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီး ၂ လုံး တ႐ုတ္ ဝင္မည္ .
တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီး ၂ လုံး ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ ၊ ေဟာင္ေကာင္ ၊ ထိုင္ဝမ္ ၊ ဂ်ပန္ကြၽန္းဆြယ္မ်ား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ၾကဳံေတြ႕ႏိုင္
သိပ္မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္း အပူပိုင္းမုန္တိုင္း Cempaka နဲ႔ In-Fa လို႔ေခၚတဲ့မုန္တိုင္းႀကီး ၂ ခုဟာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကေန အေနာက္အာ႐ွႏွင့္ေျမာက္ဘက္ဘက္ကို
ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ဘို႔တာဆူေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ မိုးအဆက္မျပတ္႐ြာသြန္းႏိုင္တယ္လို႔ CNN သတင္းမွာေဖာ္ျပသြားပါတယ္ ။ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေတြလည္းၾကဳံေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္ ။
Cempaka အပူပိုင္းဇုန္မုန္တိုင္းအျဖစ္ကေန တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္ အဂၤါေန႔မနက္ပိုင္း ၀၅:၀၀ ခန္႔မွာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ၊ ေဟာင္ေကာင္ကမ္းေျခကေန ကီလိုမီတာ ၁၈၅ အကြာကေနဗဟုျပဳကာ ၁ နာရီလွ်င္ ကီလိုမီတာ ၁၂၀ ႏႈန္းနဲ႔ တိုက္ခတ္ႏိုင္ပါသည္ ။
ေဟာင္ေကာင္ကိုေတာ့ တစ္နာရီလ်င္ ကီလိုမီတာ ၄၁ မွ ၆၂ ကီလိုမီတာအထိ ျဖတ္သန္းတိုက္ခိုက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ အေရးေပၚသတိေပးခ်က္အဆင့္ ၃ ထိေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
In-Fa မုန္တိုင္းကေတာ့ ေျမာက္ဘက္ကိုေ႐ြ႕လ်ားသြားၿပီး ထိုင္ဝမ္ကြၽန္းႏွင့္ ဂ်ပန္ကြၽန္ဆြယ္ေတာင္ပိုင္းကို တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္အားေျပာင္းသြားႏိုင္တယ္လို႔သုံးသပ္ထားပါတယ္ ။
Cempaka မုန္တိုင္းႏွင့္ထိပ္တိုက္မဆုံႏိုင္ပါဘူး ၊လာမယ့္ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတိုက်ိဳၿမိဳ႕ေတာ္မွာ က်င္းပမည့္ အိုလံပစ္အားကစားပြဲေတာ္အတြင္း မုန္တိုင္းႏွင့္ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရပါသည္ ။
ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံကိုေတာ့ လာမည့္ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ မုန္တိုင္းဟာအားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ဝင္ေရာက္မွာျဖစ္ၿပီးႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္းသဘာေဘးဒဏ္အဆိုး႐ြားဆုံးကို ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ႏိုင္တယ္လို႔ေရးသားထားပါတယ္ ။
သုံးပတ်အတွင်း မြန်မာ့လူဦးရေထက်ဝက်ခန့် ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရပြီး လူဦးရေ ၁၀ သန်းမှ ၁၅ သန်းထိလျော့ကျသွားနိုင်
July 18, 2021 by Shwengwe Games
မြန်မာ့လူဦးရေ ၅၅ သန်း၏ ထက်ဝက် ၃ ပတ်အတွင်း ကိုဗစ်မျိုးကွဲ Alpha သို့မဟုတ် Delta ကူးစက်ခံရပြီး အနည်းဆုံး လူဦးရေ ၁၀ သန်းမှ ၁၅ သန်းအထိ လျော့ကျသွားနိုင်ကြောင်း နာမည်ကျော်၊ဂုဏ်သတင်းရှိသည့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူတချို့ကို ကိုးကား၍ Asia Times က ဖော်ပြသော ဆောင်းပါးတစ်ခုတွင် ရေးသားထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ၏ ခန့်မှန်းချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၅၅ သန်းသောလူ ဦး ရေ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း သည် ၃ ပတ်အတွင်း Alpha သို့မဟုတ် Delta အမျိုးအစား Covid-19 ကူးစက်လိမ့်မည်ဟု Asia Times၏ ဆောင်းပါးတွင်ခန့်မှန်းထားသည်။
အလွန်နာမည်ကြီးသောပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကျွမ်း ကျင်သူတ ဦး က ကိုဗစ်ကပ်ဘေးပြီးလွန်မြောက်ချိန်တွင် မြန်မာ့လူ ဦး ရေအနည်းဆုံး ၁၀ သန်းမှ ၁၅ သန်းလျော့ကျသွားလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။
အဆိုပါ ဆောင်းပါးတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျန်းမာရေးစနစ်ပြိုလဲနေပုံ၊ စစ် တပ်၏ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ညံ့ဖျင်းပြီး အမိန့်အာဏာဖြင့် လူထုကိုအောက်စီဂျင်ရရှိရေး ပိတ်ပင်မှုများ၊ ဖိနှိပ်မှုများ၊ မတရားစစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့် CDM များ၏ အခြေအနေ၊ နိုင်ငံတစ်ဝန်း စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်နေသော လှုပ်ရှားမှုများ အပါအဝင် ပြည်တွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများအားလုံးကို သုံးသပ်ရေးသား တင်ပြထားသည်။
ဆောင်းပါးရှင်သည် မြန်မာ့အရေးကို နှစ် ၃၀ နီးပါးလေ့လာပြီး မြန်မာ့ရေးရာ စာအုပ်များ ထုတ်ဝေခဲ့သူ တွဲဖက်ပါမောက္ခ Mary P Callahanဖြစ်သည်။ သူသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်၊ ဟင်နရီအမ်ဂျက်ဆင်ကျောင်း၊ နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးဌာနမှ တွဲဖက်ပါမောက္ခလည်းဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါးရှင် Mary P Callahan သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အထိ ရန်ကုန်တွင် အခြေစိုက်၍ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ၊ ရွေးကောက်ပွဲ၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စရပ်များတွင် အကြံပေးမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ref – asiatimes
သုံးပတ္အတြင္း ျမန္မာ့လူဦးေရထက္ဝက္ခန္႔ ကိုဗစ္ကူးစက္ခံရၿပီး လူဦးေရ ၁၀ သန္းမွ ၁၅ သန္းထိေလ်ာ့က်သြားႏိုင္
ျမန္မာ့လူဦးေရ ၅၅ သန္း၏ ထက္ဝက္ ၃ ပတ္အတြင္း ကိုဗစ္မ်ိဳးကြဲ Alpha သို႔မဟုတ္ Delta ကူးစက္ခံရၿပီး အနည္းဆုံး လူဦးေရ ၁၀ သန္းမွ ၁၅ သန္းအထိ ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ေၾကာင္း နာမည္ေက်ာ္၊ဂုဏ္သတင္း႐ွိသည့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးကြၽမ္းက်င္သူတခ်ိဳ႕ကို ကိုးကား၍ Asia Times က ေဖာ္ျပေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ခုတြင္ ေရးသားထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၅၅ သန္းေသာလူ ဦး ေရ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ ၃ ပတ္အတြင္း Alpha သို႔မဟုတ္ Delta အမ်ိဳးအစား Covid-19 ကူးစက္လိမ့္မည္ဟု Asia Times၏ ေဆာင္းပါးတြင္ခန္႔မွန္းထားသည္။
အလြန္နာမည္ႀကီးေသာျပည္သူ႕က်န္းမာေရးကြၽမ္း က်င္သူတ ဦး က ကိုဗစ္ကပ္ေဘးၿပီးလြန္ေျမာက္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့လူ ဦး ေရအနည္းဆုံး ၁၀ သန္းမွ ၁၅ သန္းေလ်ာ့က်သြားလိမ့္မည္ဟုခန္႔မွန္းထားသည္။
အဆိုပါ ေဆာင္းပါးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးစနစ္ၿပိဳလဲေနပုံ၊ စစ္ တပ္၏ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ညံ့ဖ်င္းၿပီး အမိန္႔အာဏာျဖင့္ လူထုကိုေအာက္စီဂ်င္ရ႐ွိေရး ပိတ္ပင္မႈမ်ား၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ မတရားစစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ CDM မ်ား၏ အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ေနေသာ လႈပ္႐ွားမႈမ်ား အပါအဝင္ ျပည္တြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားအားလုံးကို သုံးသပ္ေရးသား တင္ျပထားသည္။
ေဆာင္းပါး႐ွင္သည္ ျမန္မာ့အေရးကို ႏွစ္ ၃၀ နီးပါးေလ့လာၿပီး ျမန္မာ့ေရးရာ စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေဝခဲ့သူ တြဲဖက္ပါေမာကၡ Mary P Callahanျဖစ္သည္။ သူသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဝါ႐ွင္တန္တကၠသိုလ္၊ ဟင္နရီအမ္ဂ်က္ဆင္ေက်ာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးဌာနမွ တြဲဖက္ပါေမာကၡလည္းျဖစ္သည္။
ေဆာင္းပါး႐ွင္ Mary P Callahan သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိ ရန္ကုန္တြင္ အေျခစိုက္၍ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အၾကံေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
အဂတိစွဲချက်များ ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး ဖန်တီးတဲ့သဘောမျိုးလို့ ပြောဆို
July 17, 2021 by Shwengwe Games
အဂတိလိုက်စားမှု စွဲချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ စွပ်စွဲထားသလို အဂတိငွေတွေကို သူ့အနေနဲ့ လက်ခံစရာ အကြောင်းလည်း မရှိခဲ့သလို ပေးစရာအကြောင်းလည်း မရှိဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရှေ့နေဖြစ်သူတွေကို ငြင်းဆန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အဂတိလိုက်စားမှု ၄ မှုနဲ့ အခုတပတ်မှာ နောက်ထပ် ထပ်ပြီးတော့ တရားစွဲဆိုလိုက်တာပါ။ အခုတပတ်အတွင်း တရားရုံးရဲ့ အမှုသွားအမှုလာ အခြေအနေတွေကိုတော့ ကိုရန်နိုင်က သုံးသပ် တင်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် တရားစွဲထားတဲ့ အမှုတွေကို နေပြည်တော်က သီးသန့်တရားရုံးမှာ ကြားနာစစ်ဆေးနေတာဟာ အခုဆိုရင် သီတင်းပတ် ၅ ပတ်မြောက်ရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတပတ်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အဂတိလိုက်စားမှု ၄ မှုနဲ့ ထပ်ပြီးတော့ တရားစွဲလိုက်ပါတယ်။ အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ အမှုတွဲစာရွက်စာတမ်းတွေကို မရသေးတဲ့အတွက် အမှုမှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာ အချက်အလက် အသေးစိတ်တွေကို မသိရသေးပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားအပေါ်မှာ အပြည့်အဝ ယုံကြည်တယ်လို့ သူမရဲ့ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်က ပြောပါတယ်။
“ကျနော် တလျှောက်လုံး ပြောခဲ့ပါတယ်၊ ဒီအမှုတွေကို ပထမဆုံး စပြီးတော့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့ မောင်ဝိတ်နာမည် ဖော်ပြီးတော့ ပြောကတည်းက စွပ်စွဲကတည်းက ကမ္ဘာကိုတောင် ကျနော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ အရင်ကတည်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ကျနော်နဲ့ ကွဲလွဲမှုတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘယ်လောက်ပဲ ချို့ယွင်းချက်ရှိတယ်ပဲပြောပြော၊ ခုနကလို လူမျိုးရေးကိစ္စမျိုးတွေ ရှိကောင်းရှိမယ်၊ ကျောင်းသားကိစ္စမျိုးတွေ ရှိကောင်းရှိမယ်၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကျင့်စာရိတ္တ၊ နောက်တခါ ကိုယ်ကျိုးရှာမှု၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်မှု အဲဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မြန်မာပြည်မှာ ကျနော် နှစ်ပေါင်းများစွာ နိုင်ငံရေးလေ့လာသူအဖြစ် ရှိခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံအရ သူဟာ အသန့်စင်ဆုံးထဲမှာ တယောက်ပါတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အဲဒီတော့ အမှုအကြောင်းအရာတွေကို ခဏထားလိုက်၊ လူပုဂ္ဂိုလ်အရကိုပဲ ကျနော်က ယုံယုံကြည်ကြည်ရှိတယ်။ သူဟာ ဒီဟာတွေကို မကျူးလွန်နိုင်ဘူးလို့။ အဲဒါကတော့ ကျနော့်သဘောထားပါ။”
ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က လာဘ်ထိုးတဲ့အနေနဲ့ပေးတဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ သိန်းနဲ့ အကယ်ဒမီ အခေါက်ရွှေ ၇ ပိဿာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ခံယူခဲ့တာအပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူထားတဲ့ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက် ရန်ကုန်နဲ့ နေပြည်တော်တို့မှာ မြေနေရာရယူတာ၊ အဆောက်အဦးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရာထူးအာဏာကို အလွဲသုံးစား လုပ်ခဲ့တာကို အဂတိလိုက်စားမှု ကော်မရှင်က စစ်ဆေးတွေ့ရှိထားတယ်လို့ စကစ က ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အဂတိလိုက်စားမှု စွဲချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကရော ဘယ်လိုများ တုံ့ပြန်ပြောဆိုထားတာ ရှိပါသလဲ၊ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူမရဲ့ရှေ့နေ နောက်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးကြည်ဝင်းပြောတာက …
“အဲဒါကတော့ သူကိုယ်တိုင်က ပြောတာကတော့ ဖြိုးမင်းသိန်းအနေနဲ့ကတော့ သူ့ကိုမပေးရဲပါဘူးတဲ့။ ပေးစရာအကြောင်းလည်း မရှိဘူးတဲ့။ သူကလည်း ဒီဥစ္စာကို လက်ခံစရာအကြောင်း မရှိဘူးတဲ့။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း လက်ခံမှာမဟုတ်တာကို ဖြိုးမင်းသိန်းလည်း သိမှာပဲတဲ့။ အဲဒီလိုပြောတယ်။ ဖြစ်ရပ်ပေါ် အကြောင်းအရာက သဘာဝမကျဘူးပေါ့။ ဖြစ်နိုင်ချေမရှိဘူးပေါ့။ ဒါ ဖန်တီးတဲ့သဘောမျိုးလို့ပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ အဲဒီလိုပြောတယ်။”
အဂတိစြဲခ်က္မ်ား ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး ဖန္တီးတဲ့သေဘာမ်ိဳးလို႔ ေျပာဆို
အဂတိလိုက္စားမႈ စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စြပ္စြဲထားသလို အဂတိေငြေတြကို သူ႕အေနနဲ႔ လက္ခံစရာ အေၾကာင္းလည္း မ႐ွိခဲ့သလို ေပးစရာအေၾကာင္းလည္း မ႐ွိဘူးလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေ႐ွ႕ေနျဖစ္သူေတြကို ျငင္းဆန္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အဂတိလိုက္စားမႈ ၄ မႈနဲ႔ အခုတပတ္မွာ ေနာက္ထပ္ ထပ္ၿပီးေတာ့ တရားစြဲဆိုလိုက္တာပါ။ အခုတပတ္အတြင္း တရား႐ုံးရဲ႕ အမႈသြားအမႈလာ အေျခအေနေတြကိုေတာ့ ကိုရန္ႏိုင္က သုံးသပ္ တင္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ တရားစြဲထားတဲ့ အမႈေတြကို ေနျပည္ေတာ္က သီးသန္႔တရား႐ုံးမွာ ၾကားနာစစ္ေဆးေနတာဟာ အခုဆိုရင္ သီတင္းပတ္ ၅ ပတ္ေျမာက္႐ွိသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတပတ္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အဂတိလိုက္စားမႈ ၄ မႈနဲ႔ ထပ္ၿပီးေတာ့ တရားစြဲလိုက္ပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အမႈတြဲစာ႐ြက္စာတမ္းေတြကို မရေသးတဲ့အတြက္ အမႈမွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္ေတြကို မသိရေသးေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ကိုယ္က်င့္တရားအေပၚမွာ အျပည့္အဝ ယုံၾကည္တယ္လို႔ သူမရဲ႕ေ႐ွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္က ေျပာပါတယ္။
“က်ေနာ္ တေလွ်ာက္လုံး ေျပာခဲ့ပါတယ္၊ ဒီအမႈေတြကို ပထမဆုံး စၿပီးေတာ့ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲမွာ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းနဲ႔ ေမာင္ဝိတ္နာမည္ ေဖာ္ၿပီးေတာ့ ေျပာကတည္းက စြပ္စြဲကတည္းက ကမ႓ာကိုေတာင္ က်ေနာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အရင္ကတည္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ က်ေနာ္နဲ႔ ကြဲလြဲမႈေတြ႐ွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘယ္ေလာက္ပဲ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္႐ွိတယ္ပဲေျပာေျပာ၊ ခုနကလို လူမ်ိဳးေရးကိစၥမ်ိဳးေတြ ႐ွိေကာင္း႐ွိမယ္၊ ေက်ာင္းသားကိစၥမ်ိဳးေတြ ႐ွိေကာင္း႐ွိမယ္၊ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္က်င့္စာရိတၱ၊ ေနာက္တခါ ကိုယ္က်ိဳး႐ွာမႈ၊ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔မႈ အဲဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျမန္မာျပည္မွာ က်ေနာ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူအျဖစ္ ႐ွိခဲ့တဲ့ အေတြ႕အၾကဳံအရ သူဟာ အသန္႔စင္ဆုံးထဲမွာ တေယာက္ပါတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အမႈအေၾကာင္းအရာေတြကို ခဏထားလိုက္၊ လူပုဂၢိဳလ္အရကိုပဲ က်ေနာ္က ယုံယုံၾကည္ၾကည္႐ွိတယ္။ သူဟာ ဒီဟာေတြကို မက်ဴးလြန္ႏိုင္ဘူးလို႔။ အဲဒါကေတာ့ က်ေနာ့္သေဘာထားပါ။”
ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လာဘ္ထိုးတဲ့အေနနဲ႔ေပးတဲ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ သိန္းနဲ႔ အကယ္ဒမီ အေခါက္ေ႐ႊ ၇ ပိႆာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ခံယူခဲ့တာအျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားတဲ့ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒး႐ွင္းအတြက္ ရန္ကုန္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္တို႔မွာ ေျမေနရာရယူတာ၊ အေဆာက္အဦးေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရာထူးအာဏာကို အလြဲသုံးစား လုပ္ခဲ့တာကို အဂတိလိုက္စားမႈ ေကာ္မ႐ွင္က စစ္ေဆးေတြ႕႐ွိထားတယ္လို႔ စကစ က ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈ စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေရာ ဘယ္လိုမ်ား တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုထားတာ ႐ွိပါသလဲ၊ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူမရဲ႕ေ႐ွ႕ေန ေနာက္တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးၾကည္ဝင္းေျပာတာက …
“အဲဒါကေတာ့ သူကိုယ္တိုင္က ေျပာတာကေတာ့ ၿဖိဳးမင္းသိန္းအေနနဲ႔ကေတာ့ သူ႕ကိုမေပးရဲပါဘူးတဲ့။ ေပးစရာအေၾကာင္းလည္း မ႐ွိဘူးတဲ့။ သူကလည္း ဒီဥစၥာကို လက္ခံစရာအေၾကာင္း မ႐ွိဘူးတဲ့။ သူကိုယ္တိုင္ကလည္း လက္ခံမွာမဟုတ္တာကို ၿဖိဳးမင္းသိန္းလည္း သိမွာပဲတဲ့။ အဲဒီလိုေျပာတယ္။ ျဖစ္ရပ္ေပၚ အေၾကာင္းအရာက သဘာဝမက်ဘူးေပါ့။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ႐ွိဘူးေပါ့။ ဒါ ဖန္တီးတဲ့သေဘာမ်ိဳးလို႔ပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ အဲဒီလိုေျပာတယ္။”
ရုရှားဘက်မှစတင်ပစ်‌ခတ်ရာမှ ဗြိတိန်နှင့် ရုရှားတို့စစ်ရေးတင်းမာမှုဖြစ်ပေါ်လာ
June 24, 2021 June 23, 2021 by Shwengwe Games
ပင်လယ်နက်အတွင်းမှာ ရုရှားရေတပ်ဘက်က ဗြိတိန်စစ်သင်္ဘောကို သတိပေးတဲ့သဘော ခြောက်လှန့်ပစ်ခတ်ရာကနေ အခုဆိုရင် နှစ်နိုင်ငံကြားမှာ စစ်ရေးတင်းမာမှု အရှိန်အမြင့်ဆုံးကို ရောက်ရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းတွေမှာတော့ ရုရှားရေတပ်ဘက်က အကြိမ်ပေါင်းဒါဇင်နဲ့ချီ သတိပေးပစ်ခတ်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့သလို၊ ဗုံးတွေနဲ့လည်း ကျဲချခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီသတင်းကိုတော့ ယူကေဘက်က ငြင်းဆန်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းတွေအရတော့ တော်ဝင်ရေတပ်ပိုင် ဖျက်သင်္ဘော HMS Defender ဟာ ခရိုင်းမီးယားအနီး၊ ၎င်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ ရေပိုင်နက်အတွင်း ဖြတ်ကျော်ခုတ်မောင်းနေစဉ်၊ ရုရှားဘက်က အကြောင်းမဲ့စတင် ပစ်ခတ်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ ဆိုထားပါတယ်။
HMS Defender ရေတပ်သင်္ဘောဟာ တန်ချိန်(၈၅၀၀)အလေးချိန်ရှိပြီး၊ ယူကရိန်းရေပိုင်နက်ကနေတစ်ဆင့် အခြားနယ်နိမိတ်တွေကို ထိခိုက်မှုမရှိဘဲ အပြစ်ကင်းစွာ ခုတ်မောင်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း၊ ဗြိတိန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အထက်ပါသတင်းကိုတော့ သူတို့ဘက်က အတည်ပြုခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဘန်ဝေါလေ့စ်ကတော့ HMS စစ်သင်္ဘောဟာ သူမရဲ့ပုံမှန်လမ်းကြောင်းအတိုင်း မောင်းနှင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် ရုရှားဘက်ကတော့ စစ်ရေးလေ့ကျင့်တာမျိုးတွေကို မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ ပေ(၅၀၀)အရှည်ရှိ Type-45 (HMS) သင်္ဘောကြီးဟာ မွန်းလွဲပိုင်း (၁၁း၅၂)နာရီမှာ-
ရုရှားရေပိုင်နက်အတွက် ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိတို့ဘက်က (၁၂း၀၆)နာရီမှာ တစ်ကြိမ်၊ (၁၂း၀၈)နာရီမှာတစ်ကြိမ် စုစုပေါင်းနှစ်ကြိမ် သတိပေးပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ဒါတင်မကသေးဘဲ SU-24 ကင်းလှည့်တိုက်လေယာဉ်ကနေ ဗုံး(၄)လုံး ပစ်ချသတိပေးခဲ့သေးကြောင်း ဆိုပါတယ်။
မွန်းလွဲ (၁၂း၂၃)နာရီအချိန်မှာတော့ HMS သင်္ဘောကြီးဟာ ရုရှားရေပိိုင်နက်အတွင်းကနေ ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်အတွက် မော်စကိုအာဏာပိုင်တွေက နိုင်ငံတွင်းရှိ ဗြိတိန်သံတမန်တွေကို ဆင့်ခေါ်ထားပြီး၊ အမြန်ဖြေရှင်းချက်ပေးရေး သတိပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ ရှုရားဗြိတိန် စစ်ရေးတင်းမာမှု အမြင့်ဆုံးကို ရောက်ရှိစေခဲ့ပြီလို့လည်း သုံးသပ်နေကြပါတယ်။
႐ု႐ွားဘက္မွစတင္ပစ္‌ခတ္ရာမွ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ႐ု႐ွားတိုစစ္ေရးတင္းမာမႈျဖစ္ေပၚလာ
ပင္လယ္နက္အတြင္းမွာ ႐ု႐ွားေရတပ္ဘက္က ၿဗိတိန္စစ္သေဘၤာကို သတိေပးတဲ့သေဘာ ေျခာက္လွန္႔ပစ္ခတ္ရာကေန အခုဆိုရင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားမွာ စစ္ေရးတင္းမာမႈ အ႐ွိန္အျမင့္ဆုံးကို ေရာက္႐ွိသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းေတြမွာေတာ့ ႐ု႐ွားေရတပ္ဘက္က အႀကိမ္ေပါင္းဒါဇင္နဲ႔ခ်ီ သတိေပးပစ္ခတ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့သလို၊ ဗုံးေတြနဲ႔လည္း က်ဲခ်ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ဒီသတင္းကိုေတာ့ ယူေကဘက္က ျငင္းဆန္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ထြက္ေပၚလာတဲ့ သတင္းေတြအရေတာ့ ေတာ္ဝင္ေရတပ္ပိုင္ ဖ်က္သေဘၤာ HMS Defender ဟာ ခ႐ိုင္းမီးယားအနီး၊ ၎နဲ႔ဆိုင္တဲ့ ေရပိုင္နက္အတြင္း ျဖတ္ေက်ာ္ခုတ္ေမာင္းေနစဥ္၊ ႐ု႐ွားဘက္က အေၾကာင္းမဲ့စတင္ ပစ္ခတ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တာလို႔ ဆိုထားပါတယ္။
HMS Defender ေရတပ္သေဘၤာဟာ တန္ခ်ိန္(၈၅၀၀)အေလးခ်ိန္႐ွိၿပီး၊ ယူကရိန္းေရပိုင္နက္ကေနတစ္ဆင့္ အျခားနယ္နိမိတ္ေတြကို ထိခိုက္မႈမ႐ွိဘဲ အျပစ္ကင္းစြာ ခုတ္ေမာင္းခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿဗိတိန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အထက္ပါသတင္းကိုေတာ့ သူတို႔ဘက္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း မ႐ွိပါဘူး။
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဘန္ေဝါေလ့စ္ကေတာ့ HMS စစ္သေဘၤာဟာ သူမရဲ႕ပုံမွန္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေမာင္းႏွင္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ ႐ု႐ွားဘက္ကေတာ့ စစ္ေရးေလ့က်င့္တာမ်ိဳးေတြကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႐ု႐ွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကေတာ့ ေပ(၅၀၀)အ႐ွည္႐ွိ Type-45 (HMS) သေဘၤာႀကီးဟာ မြန္းလြဲပိုင္း (၁၁း၅၂)နာရီမွာ-
႐ု႐ွားေရပိုင္နက္အတြက္ ျဖတ္သန္းဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႔ဘက္က (၁၂း၀၆)နာရီမွာ တစ္ႀကိမ္၊ (၁၂း၀၈)နာရီမွာတစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္းႏွစ္ႀကိမ္ သတိေပးပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒါတင္မကေသးဘဲ SU-24 ကင္းလွည့္တိုက္ေလယာဥ္ကေန ဗုံး(၄)လုံး ပစ္ခ်သတိေပးခဲ့ေသးေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။
မြန္းလြဲ (၁၂း၂၃)နာရီအခ်ိန္မွာေတာ့ HMS သေဘၤာႀကီးဟာ ႐ု႐ွားေရပိိဳင္နက္အတြင္းကေန ထြက္ခြာသြားခဲ့ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္အတြက္ ေမာ္စကိုအာဏာပိုင္ေတြက ႏိုင္ငံတြင္း႐ွိ ၿဗိတိန္သံတမန္ေတြကို ဆင့္ေခၚထားၿပီး၊ အျမန္ေျဖ႐ွင္းခ်က္ေပးေရး သတိေပးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ဟာ ႐ႈရားၿဗိတိန္ စစ္ေရးတင္းမာမႈ အျမင့္ဆုံးကို ေရာက္႐ွိေစခဲ့ၿပီလို႔လည္း သုံးသပ္ေနၾကပါတယ္။
မော်လမြိုင်မြို့ ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်မှ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသူ တစ်ဦးအပါအဝင် ဝန်ထမ်း ၈ဦး၌ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့
June 15, 2021 by Shwengwe Games
မွန်ပြည်နယ်၊မော်လမြိုင်မြို့ရှိ ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်မှ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသူ တစ်ဦးအပါအဝင် ၈ဦး၌ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
ဒေါ်လာငွေလဲကောင်တာမှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက စတင်ကာ အနံ့ပျောက်ခြင်းကို ခံစားခဲ့ရပြီး​ စစ်ဆေးရာ COVID-19ပိုးတွေ့ရှိပြီးနောက် ဘဏ်ဝန်ထမ်းများအားဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ၈ဦးအထိပိုးတွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မွန်ပြည်နယ်အခြေစိုက် လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တစ်ခုထံမှသိရသည်။
“၂ခါစစ်တာ ၃ယောက်တစ်ခါ ၅ယောက်တစ်ခါ Positiveအဖြေထွက်ပါတယ်။စစ်ဖို့က ကျန်သေးတယ်။ကောင်လေးတစ်ယောက်ဆို လူမှုကူညီရေးမှာ ဝင်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသား အဲ့တာကိုဖြစ်တာ။အများစုကတော့ ပိုက်ဆံကိုင်ရတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်”ဟု မွန်ပြည်နယ်အခြေစိုက် လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးထံမှသိရသည်။
မော်လမြိုင်မြို့ရှိ ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်ရှိ ဝန်ထမ်း ၃၀ ကျော်အားကွာရန်တင်းထားရှိကာ စစ်ဆေးရန်ကျန်ရှိနေသူများကိုလည်း ဆက်လက်စစ်ဆေးရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်းလဲသိရသည်။
ယခု ဇွန်လ တတိယပတ်အတွင်း မော်လမြိုင်မြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၌ တက်ရောက်ကုသမှုခံယူနေစဥ် သေဆုံးခဲ့သည့် ကိုဗစ် အတည်ပြုလူနာ ၃ဦးအထိရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း မော်လမြိုင်မြို့ခံလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တစ်ခုထံမှသိရသည်။
#မော်လမြိုင် #ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ် #ကာကွယ်ဆေး #ကိုဗစ်-၁၉ #COVID-19
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အပါးတော်မြဲဦးစိုးဝင်း ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်
July 25, 2020 by Shwengwe Games
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အပါးတော်မြဲအဖြစ် နှစ်ရှည်လများ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင် ဦးစိုးဝင်းဟာ ဒီကနေ့ ညနေ ၃ နာရီခန့်က ရုတ်တရက် မူးလဲပြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဦးစိုးဝင်း ကွယ်လွန်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေ တပ်ကုန်းမှာ မိတ်ဆွေတစ်ဦးဆီ အသွား လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အရောက် ကားပေါ်ကအဆင်းမှာ ရုတ်တရက် မူးလဲတာဖြစ်ပြီး ဆေးရုံရောက်တဲ့အချိန် မှာ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ ဦးစိုးဝင်းရဲ့ အနီးကပ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးက One News ကို ပြောပါတယ်။
ဦးစိုးဝင်းဟာ ၈၈ အရေးတော်ပုံကစပြီး လုပ်သားများကောလိပ်ကနေ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ သုံးရောင်ခြယ် အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ဦးပါ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် စတင်တည်ထောင်ကတည်းက ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အနီးကပ်စောင့်ရှောက်နေခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးစိုးဝင်းဟာ အခုကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက် (၅၈) နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ဇနီးနဲ့ သားနှစ်ဦး ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သာကေတမြို့နယ်မှာ နေထိုင်ကြပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ – Soe Win (FB) Credit One News